ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: March 2009
ပုံလေးကို ဒီက (http://pro.corbis.com) ယူပါတယ်။
ခုတလော ရာသီဥတုကပူပြင်းလွန်းတယ် … အိမ်အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့ကြီးနဲ့ ဘာကိုလွမ်းလို့လွမ်းမှန်းမသိ စိတ်ထဲခပ်ဆွေးဆွေးလေးဖြစ်နေမိတယ် …. အတွေးတွေကလဲ တောင်စဉ်ရေမရ ဟိုရောက်လိုက် ဒီရောက်လိုက် ….. ဟော … ကြည့်နေရင်းနဲ့မိုးတွေရွာကျလာပြန်ပြီ … မိုးရွာတော့လဲ လွမ်းတာကပျောက်မသွားပါဘူး … ပိုတောင်ဆိုးလာသလိုပဲ … လျှောက်တွေးရင်းနဲ့ပဲ ၂၀၀၃ ကနေ ၂၀၀၅ လောက်ထိ သူငယ်ချင်းတွေတူတူစုပြီး အပတ်တိုင်း ရွှေတိဂုံဘုရားရောက်ဖြစ်တာလေး ပြန်တွေးပြီး လွမ်းမိသွားတယ် ….
ကျွန်မက သူငယ်ချင်းများတယ် … ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ၁၈ နှစ်ကနေ အသက် ၄၀ကျော်အရွယ်ထိ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး ပေါင်းစုံပါတယ် … အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်မနဲ့အများဆုံးတွဲဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်းက အေမီ ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်း … အသက်ချင်းကမတိမ်းမယိမ်းဖြစ်သလို ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတွေကလဲ ခပ်ဆင်ဆင် … အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင် တစ်ခါတည်းနဲ့အဆင်ပြေချောမွေ့သွားတယ်ဆိုတာက ခပ်ရှားရှား၊ အတိုက်အခံလေးဖြစ်ပြီးမှ အဆင်ပြေသွားတတ်တာချည်းပဲ …. နောက် ကျွန်မထက် (၅)နှစ်လောက်ငယ်တဲ့ လင်းထွန်းဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းကောင်လေးတစ်ယောက်ရယ်၊ အသက် (၂)နှစ်ငယ်တဲ့ ရဲရန်အောင် ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်လေးတစ်ယောက်ရယ် အပတ်တိုင်း ဘုရားမှာတွေ့ဖြစ်ကြတယ် … အရင်က ကျွန်မတို့ လေးယောက်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းတူတူလုပ်ကြတယ် …. နောက်တော့ ကျွန်မနဲ့အေမီက အလုပ်သစ်ကိုပြောင်းသွားတယ် … ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်က အလုပ်မှာ အတိုက်အခံတွေများလွန်းလို့ ဆိုပြီး ဘုရားမှာတံမြက်စည်းလှဲပြီး ကုသိုလ်လုပ်ကြဖို့တိုင်ပင်ကြတယ် …နောက်တော့ လင်းထွန်းပါ ကျွန်မတို့နဲ့ တူတူ အပတ်တိုင်း ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ တံမြက်စည်းလိုက်လှည်းတယ် … ကျွန်မတို့ သုံးယောက်ကြားမှာ ချစ်စရာဓလေ့လေးတစ်ခုရှိတယ် … ဘုရားပေါ်တက်ရင် အငယ်ဆုံးသူက ဘိနပ်အိတ်ကို ကျေကျေနပ်နပ်ကိုင်ပေးလေ့ရှိကြတာပါ … ကျွန်မတို့က အတက်မုခ်နဲ့အဆင်းမုခ်တူလေ့မရှိတော့ ဘိနပ်တွေကို အမြဲပဲ အိတ်နဲ့ထည့်သယ်ရတယ် … လင်းထွန်းမပါတဲ့နေ့ဆိုရင် ကျွန်မကိုင်ရတယ် …. လင်းထွန်းနဲ့ကြုံရင် သူက အိတ်ကိုင်ပေးတယ် … ကျွန်မတို့တွေ မောင်နှမအရင်းတွေလိုချစ်ခင်ကြတယ် …
နောက်တော့ ရဲရန်အောင်ပါ ပါလာတယ် … တခါတလေ ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်းတွေ ၁၀ ယောက်လောက်ရှိတယ် လိုက်လိုက်လာပြီးဝိုင်းလှည်းကြတယ် ..… ကျွန်မတို့က အသင်းဝင်ထားတာမဟုတ်ပဲ လှည်းနိုင်သလောက် ဧရိယာလေးသတ်မှတ်ပြီးလှည်းကြတယ် … နေရာကတော့ ကျွန်မတို့ထိုင်လေ့ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်ပြခန်းဘက်ဆင်းတဲ့ ညောင်ပင်တစ်ဝိုက်ပေါ့ … ကျွန်မတို့ အလုပ်ဆင်းပြီဆိုရင် တံမြက်စည်းလှည်းပြီးမောရင် စားဖို့ဆိုပြီး အကြော်ကို အလှည့်ကျ ၀ယ်လေ့ရှိတယ် … ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့စုရပ်နေရာလေးကို သူငယ်ချင်းတွေ အလျှိုလျှိုရောက်လာကြရော … ကျွန်မတို့ လူစုံပြီဆိုရင် တံမြက်စည်းရှာပုံတော်အရင်ဖွင့်ရတယ် … တခါတလေ ရင်ပြင်တော်သာ တစ်ပတ်ပြည့်သွားတယ် တံမြက်စည်းက သုံးချောင်းလောက်ပဲရတယ် … နောက်ပိုင်းတော့ ဂေါပကရုံးကနေလိုသလောက်သွားငှားတယ် … ပြီးရင်သွားပြန်ပို့ပေးလိုက်နဲ့ အဆင်ပြေသွားတယ် ….
ကျွန်မတို့တွေတံမြက်စည်းလှည်းနေကြတာမြင်ရင် တချို့စုံတွဲလေးတွေ၊ တချို့ ကလေးတွေ လူကြီးတွေပါ တံမြက်စည်းခဏလောက်ပေးပါဆိုပြီး ကုသိုလ်ပါဝင်ကြတာမြင်ရတော့ ကြည်နူးမိတယ် … ပြီးတော့ ကျွန်မတို့လှည်းထားလို့ ဘုရားဖူးတွေ အမှိုက်သရိုက်ကင်းကင်းနဲ့ သွားလာနေကြတာ မြင်ရင်လည်း ကြည်နူးမိတယ် … မိုးအရမ်းရွာချထားလို့ တံမြက်စည်းလှည်းမရတဲ့နေ့တွေဆိုရင် ကျွန်မတို့ လက်နဲ့ ညောင်ရွက်ကြွေတွေလိုက်ကောက်ကြတယ် … အားလုံးပြီးပြီဆိုရင် ဇရပ်ပေါ်မှာဝိုင်းထိုင်ကြပြီး အလယ်မှာအကြော်ထုတ်ချ၊ သူငယ်ချင်းတွေ အကြော်စားကြရင်း အလုပ်အကြောင်း၊ ပြင်ပဗဟုသုတတွေအကြောင်း၊ အနုပညာအကြောင်း သိသလောက်လေးတွေဝေမျှကြတယ် … ဆွေးနွေးကြတယ် … ကျွန်မတို့တွေ ၉ ခွဲလောက်ထိ နေကြပြီးရင် အသီးသီးလမ်းခွဲကြလေ့ရှိတယ် … တစ်ပတ်တစ်ရက်နဲ့ ဒီအကျင့်လေးကို ကျွန်မတို့ သုံးနှစ်နီးပါး မပျက်မကွက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြတယ် …
ခုချိန်မှာတော့ ကျွန်မတို့တွေအားလုံးနေရာတကွဲစီမှာရောက်နေကြပြီ … တချို့က ရန်ကုန်မှာ၊ တချို့က ဘန်ကောက်မှာ၊ တချို့က စင်္ကာပူမှာ …. ကျွန်မတို့တွေအရင်လိုပြန်ဆုံကြဖို့မလွယ်တော့ဘူး …. ဆုံဖြစ်ကြရင်ရော ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ကျွန်မတို့ တံမြက်စည်းလှည်းနေကြနေရာလေးမှာ ဆုံနိုင်ပါတော့မလားလို့ တွေးရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတယ် …. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တချိန်က အမှတ်တရလေးကိုတော့ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှမေ့ပျောက်မှာမဟုတ်သလို သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ အမြဲတမ်းသတိရနေမိပါတယ် …..
မှတ်ချက်။ ။ အေမီ၊ လင်းထွန်း၊ ရဲရန်အောင်၊ ကိုလင်း၊ သူရိန်၊ အောင်ညီလတ် နဲ့ မကြာခဏလိုက်လာ ကုသိုလ်ပြုလေ့ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို သတိရလို့ရေးလိုက်တဲ့ပို့စ်လေးပါ ….
Posted by ကြယ်ပြာ at 2:34 AM 12 comments Links to this post
သူမက မိန်းကလေးပေမယ့် ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကြားကြီးပြင်းလာခဲ့သူ ... သူမကစားသော ကစားနည်းများအားလုံးနီးပါးက ယောက်ျားလေးများကစားသော ကစားနည်းများ …. ဂေါ်လီပစ်၊ ဂျင်ပေါက်၊ ဘောလုံးကန်၊ အံစာလှိမ့်၊ ပြေးတမ်းလိုက်တမ်း စုံတကာကိုစိနေတာပဲလေ … သူမ ငယ်ငယ်ကပုံရိပ်က အင်မတန် ပေချောင်ချောင်နိုင်သောပုံရိပ် … ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘာကစားနေလဲ သူမ မပါဘူးဆိုတာမရှိသလောက်ပဲ ….
သူမတို့ငယ်ငယ်က ကြွေပန်းကန်စိအကွဲတွေကို ထောင်ပြီးဂေါ်လီနဲ့ပစ်လေ့ရှိတယ် … တချို့ကတော့ ပိုက်ဆံထောင်ပြီးပစ်ကြတယ် ….. ဒါပေမယ့် သူမကတော့ ပိုက်ဆံနဲ့ဘယ်တော့မှပစ်လေ့မရှိဘူး ….ဒီကစားနည်းကစားဖို့ ကြွေပန်းကန်စိအကွဲတွေလိုပြီလေ … ကြွေပန်းကန်စိပစ်တဲ့အချိန် ကိုယ့်မှာ အဲ့ဒါတွေများများရှိလို့ကတော့ ကိုယ်ကခပ်မော့မော့နဲ့ဝင်ပစ်လို့ရသကိုး … ဒီတော့သူမကဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ နောက်ဖေးလမ်းကြားတကာ လမ်းကြားလှည့်ပြီး အိမ်တကာက ပျက်စီးသွားလို့ပစ်ထားတဲ့ ပန်းကန်အကွဲတွေလိုက်ကောက်တော့တာပေါ့ … အကွဲတွေရလာရင် သူမအိမ်ရှေ့မှာချပြီး အပိုင်းအရွယ်တော်အသေးလေးတွေရအောင်ထိုင်ခွဲ … ပြီးရင် အိတ်တစ်အိတ်ထဲစုထည့် …. ပြီးရင် အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးခါးမှာချိတ်ပြီး လမ်းတကာလှည့်ပစ်တော့တာပဲ …. သူမက လက်လဲ အတော်ဖြောင့်တယ် … ဂေါ်လီပစ်ရင် နိုင်တာများတယ် … သူမမှာ ဂေါ်လီတွေဆိုလဲ အိတ်ကြီးနဲ့တစ်လုံးရှိတယ် …. အမေက အဲ့လိုတွေဆော့တာသိပ်မကြိုက်သလို၊ နောက်ဖေးလမ်းကြားထဲဝင်တာလဲမကြိုက်ဘူးလေ …
ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေက အမှိုက်ပုံသာသာရယ် … ညစ်ပတ်နံစော်နေတာလေ …. ပြီးတော့ အကွဲတွေရှမှာ၊ ပုလင်းကွဲစူးမှာ၊ အကောင်ပလောင်တွေကိုက်မှာ အမေကစိုးရိမ်သေးတယ် … နောက်ပြီးတော့ ကောက်လာသမျှအကွဲတွေကို သူမက အိမ်ရှေ့မှာဒီအတိုင်းထားထားပစ်ခဲ့တတ်တာကိုး …. အမေကသိပ်အသန့်ကြိုက်တဲ့သူ … သူမက အမေလှဲကျင်းထားတဲ့ အိမ်ရှေ့ကိုညစ်ပတ်အောင်လုပ်သူ … သူမက ဆော့ပြီဆိုရင် မိုးမမြင်၊လေမမြင် … ခေါ်မကြား၊ အော်မကြား … သိပ်ကြောက်ရတဲ့ အမေခေါ်ရင်တောင် မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆော့တာ … ပြန်လာရင်လည်း အတီးခံရတာလဲ ခဏခဏ …. ဘယ်လောက်ရိုက်ရိုက် နောက်နေ့ရောက်ပြန်တော့လဲ သူမကိုကြွေပန်းကန်စိအထုပ်ရယ်၊ ဂေါ်လီထုပ်ရယ်နဲ့ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့အပြိုင် ဂေါ်လစ်ပစ်နေတာကို မြင်ရပြန်ရော …. ကဲ ….. သူမနဲ့ ဂေါ်လီပြိုင်ပစ်ကြမလားဟေ ……
မှတ်ချက်။ ။ပုံလေးကို ဒီက http://www.britannica.com ယူပါတယ်။ ပြီးတော့ပုံက ဂေါ်လီပုံမတွေ့လို့ တွေ့တဲ့ပုံထဲက ဂေါ်လီနဲ့တူတာရွေးထားတာပါ။
Posted by ကြယ်ပြာ at 2:25 AM 16 comments Links to this post
(Image from http://www.partyrama.co.uk, http://www.olga-art.info)
ကိုကြီးရေ ဒီနေ့ နင့်ရဲ့ (၃၂) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နော် …. ငါ ပထမ မေ့နေတာဟ …. မနေ့ညက ငါနဲ့ ငဖြိုးလေး အိမ်ကိုဖုန်းဆက်တော့မှ နင့်မွေးနေ့ကိုရုတ်တရက်သတိရလိုက်တာ … ငါနင့်အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်မ၀ယ်ရသေးဘူးကိုကြီးရ …. နင်ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတာငါသိတယ်နော် ….
ငါ နောက်မှဝယ်ပေးမယ်ဟာ … နော် …. ကိုကြီးရေ နင်က ငါ စိတ်ညစ်တာတွေပြေစေဖို့ဆိုပြီး နေ့တိုင်း ဘုရားရှိခိုး၊ မေတ္တာပို့ပေးတယ်တဲ့လား … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးရာ …. အဲ့ဒါလေးတွေကြောင့်လဲ ငါနင့်ကိုချစ်တာဟ … သိလား ….
မိသားစုကို သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ ကိုကြီး …
အမေ နေမကောင်းလို့ တစ်ချက်လောက် စုပ်သပ် သံလေးကြားလိုက်တာနဲ့ အချိန်မရွေးချက်ခြင်းပြုစုပေးတတ်တဲ့ကိုကြီး ….
အဖေ့မျက်နှာရိပ်ကြည့်ပြီး အလိုက်တသိ နင်းနှိပ်ပေးတတ်တဲ့ ကိုကြီး ….
ငါနဲ့ငဖြိုးလေး အပေါ်မှာ အစ်ကိုလိုရော၊ အစ်မလိုပါစောင့်ရှောက်ပေးတတ်တဲ့ ကိုကြီး ….
ငါ့ကိုသိပ်ချစ်တဲ့ ကိုကြီး ….
နင့်ရဲ့ ဒီမွေးနေ့က စလို့ အသက်ရှည်သလောက် ကျန်းမာပါစေ ….
ကျန်းမာသလောက် စိတ်ချမ်းသာပါစေ ….
ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေရတာ တထပ်တည်းကျနိုင်ပါစေ …
တထပ်တည်းမကျခဲ့ရင်လဲ ဖြစ်နေရတဲ့အပေါ် အကောင်းဆုံးလမ်းလျှောက်နိုင်ပါစေ ….
နင့်ရဲ့ ချစ်သူ “ခိုင်လေး” နဲ့ ထာဝရပျော်ရွှင်စွာ လက်တွဲနိုင်ပါစေ ….
ငါ့ကိုလဲ ဒီအတိုင်းထက်မပိုရင်တောင် မလျော့ပဲဆက်ချစ်နိုင်ပါစေ လို့ ငါ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ….
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:00 PM 10 comments Links to this post
တစ်ခွန်းမှ ဟန်လုပ်ပြီးမမေးခဲ့မိဘူး .........
အဓမ္မ ပိတ်ထားပစ်လိုက်တယ် .........
မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်နေဆဲ ……….။။
မှတ်ချက်။ ။ ပုံလေးကို ဒီက (https://www.artanddesignonline.com) ယူပါတယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 11:08 PM 10 comments Links to this post
(Image from http://www.marybethart.com)
မေကြီးရေ ခုတလော သမီးအတွေးတွေယောက်ယက်ခတ်နေသလိုပဲ …. တစ်ခုခုစဉ်းစားနေရင်း မပြီးခင် နောက်တစ်ခုကို စဉ်းစားမိတာမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတယ် …. အိမ်ကိုလဲ ခဏခဏသတိရလို့ ဖုန်းဆက်ဆက်နေမိတာနဲ့ ဖုန်းကဒ်ဖိုးတွေလဲ ကုန်တာမနည်းဘူး …. ဒါပေမယ့် မေတို့ ဖေတို့ နဲ့စကားပြောရတာ သမီး စိတ်ချမ်းသာတယ် … မေတို့က သမီးကိုစိတ်ပူ၊ သမီးက မေတို့ကိုစိတ်ပူနဲ့ ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေတာပဲ …
မေနဲ့သမီးနဲ့ သားအမိရယ်လို့ ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားသိပ်မပြောဖူးဘူးနော် …. ဖုန်းထဲကနေဆိုရင် လည်း ဖေနဲ့စကားပြောသလောက် မရင်းနှီးဘူး …. မေကလဲ ပြန်ခံပြောတာ ဘယ်လိုမှမကြိုက်တဲ့သူ၊ သမီးကလဲ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် တစက်မှ မလျော့ချင်တဲ့သူ ဆိုတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက သိပ်မတည့်ဘူးလေ …. ငယ်ငယ်တုန်းက သူများတွေက “ဖေနဲ့မေ ဘယ်သူ့ကိုချစ်လဲ” မေးရင် “ဖေကြီးကိုပဲချစ်တယ်” လို့ သမီးအမြဲဖြေလေ့ရှိတယ် …
ဒါပေမယ့် ခု မေ့ကို အရမ်းသတိရနေတယ် … မေ့မျက်လုံးသက်သာရဲ့လားမသိဘူး …. သေချာရောပြန်မြင်ပါ့မလား စိတ်ပူနေမိတယ် … ဘာလိုလိုနဲ့ မေ့မျက်လုံးထိခိုက်ထားတာ တစ်နှစ်တောင်ပြည့်တော့မယ် …. ဒီတစ်ခေါက်လေဆာပစ်ပြီးရင်တော့ အခြေအနေတစ်ခုခုသိရမယ်ထင်တယ် … မေ့မျက်လုံး အရင်အတိုင်းပြန်ကောင်းပါစေလို့ သမီးဆုတောင်းနေပါတယ်….
သမီးရင်ထဲမှာရှိပြီး မေ့ကိုမပြောဖြစ်တဲ့စကားတွေကို သမီး စာတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ချရေးနေဖြစ်တယ် …..
သမီးငယ်ငယ်က မေ့ကို အထင်တွေလွဲခဲ့ဖူးတယ် … မောင်နှမသုံးယောက်ထဲမှာ သမီးက အဆူခံရဆုံး၊ အရိုက်ခံရဆုံးလေ …. မေပြောနေကျစကားရှိပါတယ် “မိန်းကလေး တစ်ယောက်တည်းပါပါတယ် … သူကငါးဖယ်မ၊ ထုလေမာလေ” တဲ့ …. “ဘာလို့ ငါ့ကိုမှရွေးရိုက်တာလဲ” ဆိုပြီးမကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပါ … မေ့ကိုလဲ ဘာလို့ဒေါသကြီးမှန်း နားကိုမလည်ပေးနိုင်ဘူး … အေးအေးဆေးဆေးပြောလဲရတာပဲဆိုပြီး စိတ်ဆိုးမိတယ်…. ခုတော့ မေ့ကိုသမီးနားလည်တတ်လာပါပြီ … မေက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်ထောင်ကျခဲ့တဲ့အပြင် အိမ်မလည်၊ အပြင်သိပ်မထွက်ပဲ အိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်တတ်တဲ့ မေ့အတွက် ဒီမိသားစုငါးယောက်သည်သာ မေ့ကမ္ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို သမီး သိလာတာသိပ်မကြာသေးဘူး …. ပြီးတော့ မေ့မှာ ဆီးချိုကလဲရှိ၊ နှလုံးသွေးကြောကလဲကျဉ်းတော့ နေမကောင်းသူတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း စိတ်တို၊စိတ်ဆတ်တယ်…. အဲ့ဒီတော့ ထစ်ကနဲရှိ ဆူမယ်ဆိုတာချည်းပဲဆိုတာကိုလဲ သမီးနားလည်တတ်လာပါပြီ ….
မေကြီးရေ …. သမီးတို့သားအမိနှစ်ယောက်တူတာဆိုလို့ ဘောလုံးပွဲမကြိုက်တာ တစ်ခုပဲရှိမယ်ထင်တယ် … ဘောလုံးပွဲ လွှင့်တဲ့နေ့ဆိုရင်တော့ သမီးတို့စည်းလုံးကြတယ်နော် … ဖေကြီးရယ်၊ ကိုကြီးရယ်၊ မောင်လေးရယ်က အားရပါးရ အော်ဟစ်အားပေးပြီးကြည့်ကြတော့ သမီးက နားမခံသာတော့ မေ့ကိုကပ်ပြီးချွန်ရတာလေ ….“မေကြီး ကိုကြီးတို့ကိုပြောလိုက်လေ … အော်ပြီးကြည့်ရင် တီဗွီလာပိတ်မယ်” လို့ဆိုတော့ မေက သမီးပြောတဲ့အတိုင်း အော်ပေးတယ် … မကြိုက်တာချင်းတူလို့လေ ….း)
“မေကြီးက သိပ်အမိန့်ပေးတာပဲ …. သမီးမလုပ်ချင်တာတွေကို ဗီတို အာဏာနဲ့ခိုင်းတယ် …. ပြီးတော့ စိတ်တိုင်းမကျရင်လဲ ဆူပြန်သေးတယ် …. အရိုက်ကလဲ ခံရသေးတယ် …. တကယ်ကလေ သမီးက မေ့ကိုမကြောက်ပါဘူး … မေ့လက်ထဲက ကြိမ်လုံး ကိုကြောက်တာ … သမီးက အသားနာမခံနိုင်သလို နားပူလဲမခံနိုင်ပါဘူး …..” လို့ စိတ်ထဲမှာ ခဏခဏပြောဖြစ်တယ် …. အပြင်မှာပြောရင် ကြိမ်လုံးစာမိမှာစိုးလို့လေ …
သားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင် ရှေ့မှာမားမားမတ်မတ်ရပ်ပေးတဲ့ မေ၊ တစ်အိမ်လုံးကိစ္စကို သူကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှကျေနပ်တဲ့မေ၊ ဟင်းချက်သိပ်ကောင်းလွန်းတဲ့မေ၊ တခါတရံ မထင်မှတ်လောက်အောင် နောက်ပြောင်တတ်ပြီး မိသားစုကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့ မေ
အဲ့လိုလေး အမြဲနေနိုင်အောင် မေ့ကျန်းမာရေးကို သေချာဂရုစိုက်ပါနော် .....
Posted by ကြယ်ပြာ at 11:14 AM 12 comments Links to this post
(မှတ်ချက် - ပုံကိုဘယ်ကရမှန်းမသိတော့ပါဘူးရှင်)
“မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်နေတာ” ဆိုတဲ့စကားကို ကျွန်မ ခဏခဏကြားဖူးသလို၊ ကိုယ်တိုင်လဲ ပြောဆိုဖူးတယ် ….အဲ့ဒီစကားကိုပြောရတာလဲ အရသာပြည့်ပြည့်၀၀ ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ် …. ဘာလို့လဲဆိုတော့ မျှော်လင့်စရာမရှိတော့ရင် လူ့ဘ၀ကြီးမှာ ကြိုးစားချင်စိတ်လဲမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ ကျွန်မက ထင်တာကိုး …. ဒါကြောင့် အဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်ကွယ်က ပူလောင်လွန်းတဲ့ခံစားချက်ကို မမြင်နိုင်မိသလို “မျှော်လင့်ခြင်းကင်းတာ” နဲ့ “မျှော်လင့်ချက်မရှိတာ” ကိုလဲ သေသေချာချာသရုပ်မခွဲနိုင်ခဲ့ဘူး …
ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းတော့ အရင်တုန်းက မျှော်လင့်ခဲ့တာတွေအတွက်ရော၊ ခုလက်ရှိမှာရော မျှော်လင့်ချက်ပေါင်းစုံနဲ့ ပူလောင်နေခဲ့တာတွေကို ခံစားမိလာတယ် …. သေးသေးဖွဲဖွဲကစလို့ ကြီးကြီးမားမားအထိပေါ့ ….
ကျွန်မ ၁၀ တန်းကို အမှတ်များများရဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတယ် … ကိုယ်မျှော်မှန်းသလောက်ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာ မျက်ရည်ကျခဲ့ဖူးတယ် … (အမှန်တော့ ကျွန်မ ကြိုးစားဖို့လိုခဲ့တာပါ ….) ကျွန်မ ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆီက ကျွန်မချစ်တာနဲ့ ထပ်တူညီတဲ့ ချစ်ခြင်းမျိုး မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတယ် …. မသာရင်နေ လျော့တာ မလိုချင်တဲ့ကျွန်မ လိုချင်တာမရခဲ့လို့ ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရဖူးတယ် ..… ကျွန်မ ပထမဆုံးအလုပ်စလုပ်တော့ ကျွန်မ နေချင်တဲ့ Team မှာနေရဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတယ် ….. Team Lead တွေက ကျွန်မတို့ Batch က လူဆယ်ယောက်ထဲကနေ တစ်နေ့ တစ်ယောက်လာလာရွေးထုတ်၊ ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မက နောက်ဆုံး ၃ ယောက်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့ရတယ် ….. စောစောရွေးချယ်ခံရဖို့မျှော်လင့်မိတဲ့ကျွန်မ တစ်ပတ်တိတိ စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်မနေချင်သော Team ထဲကိုပဲ ရောက်ခဲ့ရတယ် ….ကျွန်မ သိပ်ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ပထမဆုံးချစ်သူဆီက ကျွန်မမျှော်လင့်တဲ့နားလည်မှု့နဲ့ ချစ်ခြင်း မရခဲ့လို့ ကျွန်မ ထိထိခိုက်ခိုက် နာကျင်ခံစားခဲ့ရဖူးတယ် … နောက် အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်က အကောင်းဆုံးဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ထင်သလိုတွေဖြစ်မလာပြန်ဘူး …. မျှော်လင့်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ အချိန်တွေကို စတေးပြီး စိတ်တွေဇောကပ် ပူလောင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိထားမိတာ ခုမှပါ … စိတ်ရော လူရောပင်ပန်းပါတယ်လို့ ပြောမိလို့ “ဒါဆို မျှော်လင့်မနေနဲ့ပေါ့” ဆိုရင်လဲ သိပ်လွယ်လှတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူး .. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မက ပုထုဇဉ်ကိုး ….
မျှော်လင့်ပြီးဖြစ်မလာတဲ့အခါခံစားရတဲ့ ပူလောင်မှုကို သဘောမကျတဲ့ ကျွန်မ စိတ်တွေအေးချမ်းအောင်ဆိုပြီး ဆရာတော်ဦးဇောတိက စာအုပ်တွေဖတ်တယ်၊ ဦးသုမင်္ဂလ တရားတွေနာတယ် ပြီးတော့သတိထားပြီး ကျွန်မရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ထိန်းကြည့်တယ် …. ဘယ်လိုထိန်းလဲဆိုတော့ ဥပမာ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်လိုက်ပြီဆိုပါစို့ …. သူ့ဘက်က ပြန်လာမယ့် တုန့်ပြန်မှု့တွေကို မျှော်လင့်မနေပဲ ကိုယ်ဘက်က ချစ်နိုင်သလောက်ချစ် …… အဲ့ဒီတော့ ထပ်တူညီတာပဲပြန်လာလာ၊ မညီတာပဲပြန်လာလာ မပူပင်ရတော့ဘူး … ကိုယ်ကမှ သူ့ဆီကဘာမှမှ မမျှော်လင့်တာလေ … နေလို့သိပ်ကောင်းတယ် …. နောက်မို့ရင် သူကငါချစ်သလိုပြန်မချစ်ဘူး၊ ငါကတော့ ချစ်လိုက်ရတာဆိုပြီး ပူလောင်နေရပါဦးမယ် … နောက် အလုပ်လျှောက်တဲ့ကိစ္စဆိုပါတော့ …. ကိုယ်ဘက်ကအတတ်နိုင်ဆုံး အစွမ်းကုန်ကြိုးစား …. ငါအကောင်းဆုံးလုပ်ထားတာပဲ ခန့်တာက သူ့ကိစ္စ လို့စိတ်ထဲမယ်ထားလိုက်ရင် စိတ်အတော်အေးပါတယ် …. အရာတော်တော်များများမှာ သူ့အပိုင်း၊ ကိုယ့်အပိုင်းဆိုတာ ခွဲလို့ရပါတယ် …. ဆိုတော့ ကိုယ့်အပိုင်းကိုယ်သာ ပိုင်နိုင်ပါစေ ကျန်တစ်ပိုင်းကို သူ့သဘောနဲ့သူသွားပါစေ … ဒါဆိုနေလို့ အရမ်းအေးချမ်းတာ ကျွန်မလက်တွေ့ပါ …. နောက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှမထားပဲ ကိုယ်တတ်နိုင်တာကို အတတ်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လာပြီ …. အရင်တုန်းကဆို ကိုယ့်ကို ပိုခင်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးကစွက်သေးတာကိုး …..
မျှော်လင့်ချက်ကင်းကင်းနဲ့နေလိုက်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားမှုကို မထိခိုက်တဲ့အပြင် စိတ်ပူလောင်မှု့ကိုပါ လျော့ကျစေလို့ အလုပ်လဲပိုတွင်ပါတယ် …. ဒါကြောင့် ကျွန်မလေ အရာရာတိုင်းမှာ မျှော်လင့်ခြင်းကင်းသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ် …. ဖြစ်အောင်လဲ ကြိုးစားနေပါတယ် ….
အဲ့လိုပဲ ကျွန်မချစ်သော ကျွန်မရဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံးလဲ “မျှော်လင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်နေတာ” ဆိုတာထက် “မျှော်လင့်ခြင်းကင်းကင်းနဲ့ အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်ပါစေ” လို့ ကျွန်မဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင် ……
Posted by ကြယ်ပြာ at 10:21 AM 10 comments Links to this post
အတ္တတစ်စင်းကို ကျောပိုးခဲ့မိတယ် ….
ရယူလိုမှုတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်တယ် …
ဒုက္ခတွေနဲ့ စစ်ခင်းစေတယ် …
မောဟတွေနဲ့ တွေဝေစေတယ် …
အချစ်တွေနဲ့ လောင်မြိုက်စေတယ် ..
၀မ်းနည်းမှုတွေနဲ့ ပူဆွေးစေတယ် …
ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ ဗျာများစေတယ် ….
တခါတလေတော့လဲ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ကခုန်စေပြန်တယ် …
ဒုက္ခတွေကြုံပြန်တော့ “ဆိုးလိုက်တဲ့ကံ” လို့
ဟော .. သုခဖြစ်နေပြန်တော့လဲ
မြင်မြင်တကာတိုင်း သာယာနေသလိုလို ….
တကယ်တော့ အတ္တက ငါ့ကို
ငါမပိုင်တာတွေနဲ့ ငါ့ကို မြူဆွယ်ခဲ့တာပါ ….
ခွဲမရ ခွာမရနဲ့ ဒီသံသရာထဲ ၀ဲလှည့်ရင်း
ရုန်းထွက်လို့မရသေးတာ ခုချိန်ထိပါပဲ ……
Posted by ကြယ်ပြာ at 1:52 AM 10 comments Links to this post